VPSA Vacuum Oksizenina gropy - China Hangzhou Poly Air Separation Fitaovana
Miasa fitsipiky ny VPSA tsindry savily adsorption oksizenina gropy 1. Ny tena singa ao amin'ny rivotra azota sy ny oksizenina ireo. Azota sy ny oksizenina ao amin'ny manidina manana adsorption samihafa fampisehoana amin'ny zeolite (ZMS) amin'ny Ambient hafanana (oksizenina azo hifantoka tanteraka amin'ny alalan'ny azota). Azota amin'ny zeolite molekiolan'ny sivana adsorption fahaizany dia tsara noho ny oksizenina (azota Ion sy ny molekiolan'ny sivana ambonin'ny hery mahery), raha ny rivotra tsindry amin 'ny toetra miaraka amin'ny zeolite molekiolan'ny sivana adsorbent adsorptio ...
Miasa fitsipiky ny VPSA tsindry savily adsorption oksizenina gropy
1. Ny tena singa ao amin'ny rivotra azota sy ny oksizenina ireo. Azota sy ny oksizenina ao amin'ny manidina manana adsorption samihafa fampisehoana amin'ny zeolite (ZMS) amin'ny Ambient hafanana (oksizenina azo hifantoka tanteraka amin'ny alalan'ny azota). Azota amin'ny zeolite molekiolan'ny sivana adsorption fahaizana dia tsara noho ny oksizenina (azota Ion sy ny molekiolan'ny sivana ambonin'ny hery mahery), raha ny rivotra tsindry amin 'ny toetra miaraka amin'ny zeolite molekiolan'ny sivana adsorbent adsorption fandriana, ny azota ny molekiolan'ny sivana adsorption, tsy oksizenina ny adsorption, fitanana ary mandeha amin'ny entona dingana adsorption fandriana, ny oksizenina sy ny azota fisarahana ny oksizenina. Rehefa ny molekiolan'ny sivana adsorbs azota ho saturation, dia nitsahatra ny rivotra sy ny fanerena ny adsorption fandriana dia mihena. Ny azota variana ny molekiolan'ny sivana dia Namakafaka sy ny molekiolan'ny sivana dia nateraka indray, ary azo ampiasaina indray. Ny oksizenina azo vokarina foana amin'ny ara roa na maromaro adsorption fandriana.
Ny teboka mampangotraka azy ny oksizenina, ary azota dia akaiky, ary ny roa dia sarotra ny manavaka. Noho izany, ny tsindry savily adsorption oksizenina-kevitra fitaovana ihany no mahazo 90-95% oksizenina (ny tendrony ratsy fitanan'i ny oksizenina dia 95,6%, ary ny sisa dia argon). Raha ampitahaina amin'ny rivotra cryogenic fisarahana vondrona, ny farany dia afaka mamokatra mihoatra ny 99,5% oksizenina mifantoka.
1. Ny adsorption fandriana ny tsindry savily adsorption rivotra fisarahana oksizenina fototra dia tsy maintsy ahitana hetsika roa dingana; Adsorption sy ny fanapahan-kevitra. Mba hahazoana vokatra mandatsa-dranomaso hatrany, mihoatra ny roa adsorption fandriana dia matetika nametraka ao amin'ny oksizenina fanaovana fitaovana, ary ny sasany mpanampy dingana ilaina koa niainga avy amin'ny fomba fijery ny angovo sy ny fahamarinan-toerana. Adsorption tsirairay fandriana ankapobeny tsy maintsy mandalo dingana toy izany toy ny adsorption, decompression, vacuuming na decompression fahaterahana indray, hanondrahana asolo toerana ary na dia tsindry tosika, ka asa miverimberina matetika. Tamin'izany andro izany, samy adsorption fandriana ao amin'ny dingana samihafa fandidiana. Eo ambany ny fanaraha-maso ny plc, ny fiasan'ny maro adsorption fandriana azo mandrindra ka nivembena amin'ny dingana azo ampiharina, ka ny tsindry savily adsorption fitaovana dia afaka mihazakazaka hampandeha tsara sy hahazo vokatra mandatsa-dranomaso hatrany. Fa ny tena dingana fisarahana, soritry singa hafa eny amin'ny habakabaka dia tsy maintsy ho raisina ihany koa. Ny adsorption fahafahana ny gazy karbonika sy ny rano ny mahazatra amin'ny ankapobeny adsorbent dia be mihoatra noho ny an'ny azota sy ny oksizenina, izay azo esorina amin'ny alalan'ny famenoana ny fandriako, Dia mety adsorption adsorbent (na amin'ny alalan'ny fanaovana ny oksizenina adsorbent ihany).
Ny isan'ny adsorption tilikambo takiana amin'ny oksizenina fitaovana famokarana miankina amin'ny ambaratonga ny oksizenina famokarana, adsorbent fampisehoana sy ny dingana famolavolana. Ny hetsika fahamarinan-toerana ny multi-tilikambo hetsika dia somary tsara kokoa, fa ny fitaovana fampiasam-bola dia somary avo. Ny fironana amin'izao fotoana izao dia ny fampiasana tena mahomby oksizenina sorbent hohamaivanina ny isan'ny adsorption tilikambo sy hampiasa vanim-potoana fohy fandidiana mba hanatsarana ny fahombiazan'ny ny tarika sy hamonjy ny fampiasam-bola betsaka araka izay azo atao.
1. Simple fitaovana dingana
2. Ny maridrefy ny oksizenina famokarana dia ambany 10000m3 / h, ary ny hery fanjifàna dia ambany sy ny fampiasam-bola dia kelikely kokoa;
3. Ny habetsahan'ny sivily injeniera dia kely, ary ny fe-potoana fametrahana ny fitaovana dia fohy noho ny an'ny cryogenic fitaovana;
4. Low fitaovana fandidiana sy ny fikojakojana ny vola lany;
5. Ny fitaovana manana ny mari-pahaizana ambony eo amin'ny asa automatique, mety sy haingana mba hanokafana sy hijanona, ary ny malemy mpandraharaha maro;
6. Ny fitaovana manana fahamarinan-toerana sy ny asa mafy fiarovana avo;
7. Tsotra fandidiana, ary ny lehibe indrindra amin'ny faritra rehetra eran-malaza mpanamboatra;
8. voahadihady oksizenina molekiolan'ny ambony sieves amin'ny fampisehoana sy ny asa fanompoana ela velona;
9. Strong miasa manovaova (ambony entana tsipika sy ny fiovam-po haingana haingana).
2. Oksizenina fahadiovana: 90-94% na lehibe kokoa, izay azo ahitsy ao anatin'ny 30-95% isan-karazany araka ny fepetra mpampiasa.
3. Power fihinanana ny oksizenina famokarana: Rehefa ny oksizenina fahadiovana dia 90%, ny hery fanjifàna hiova fo ho madio oksizenina dia 0.32-0.37kwh / Nm3
4. Oksizenina tsindry: tsy mihoatra ny 20kpa (azo pressurized)
5. Power: lehibe noho na mitovy amin'ny 95%
Previous: PSA Oksizenina gropy
Next: ZBN azote gropy
Automatic Salamo Onsite Oksizenina Generator
Compact Medical Salamo Oksizenina Generator
Oksizenina levona Generator
Oksizenina levona Nano Bubble Generator
Home Oksizenina Generator
Industrial Oksizenina Generator
Oksizenina rano Generator
Oxygène Generator Fa Varingarin'i
Oxygène Generator Fa trondro Fambolena
Oxygène Generator Medical
Oxygène hydrogène Generator
Oxygène Plant Salamo oksizenina Generator
Matoantenin'ny atao Oksizenina Generator
Zeolite molekiolan'ny sivana Oksizenina Generator
ZBO Oksizenina gropy